आयुष्मानसँग ईन्गेजमेन्ट गरेकी प्रियङ्का कार्कीले गरिन अर्कैसँग बिहे ! ( भिडियो सहित )::Hamrodamak.com
आयुष्मानसँग ईन्गेजमेन्ट गरेकी प्रियङ्का कार्कीले गरिन अर्कैसँग बिहे ! ( भिडियो सहित )
काठमाडौँ। चर्चित नायिका प्रियङ्का कार्की र नेपाली मोडल दुर्गेश थापा बिच विवाह भएको छ ।आयुष्मानसँग ईन्गेजमेन्ट गरेर प्रियङ्काले अर्कैसँग गरिन बिहे ! तर कुरा हो म्युजिक भिडियोको ।
हालै सार्वजानिक हेमन्त शर्माको विल्कुलै नयाँ गित डम डम डम बज्यो बाजामा दुर्गेश थापा र प्रियङ्का कार्की एकसाथ देखिएका छन । गितलाई शिव विकले कोरियोग्राफी गरेका छन भने हेमन्त शर्माले निर्देशन गरेका छन । गितको संगित तथा शब्द पनि हेमन्तले नै तयार पारेका हुन ।हेर्नुहोस भिडियो :
दमकमा चलचित्र ‘अन्धकार’ को शुभमुहुर्त
दमक,५ जेठ । झापाको दमकबाट नेपाली कथानक चलचित्र ‘अन्धकार’ निर्माण हुने भएको छ । राज फिल्मस प्रालिको प्रस्तुति रहेको उक्त चलचित्रको शनिवार स्थानीय पशुपति मन्दिरमा एक कार्यक्रम गरि औपचारिक रुपमा शुभमुर्हत गरिएको छ । चलचित्रका...
दमकका गंगादेव म्यूजिक अवार्डको उत्कृष्ठ पाँचमा
दमक,२ जेठ । नवोदित युवा गायक गंगादेव चौधरी जेनियस म्यूजिक अवार्ड २०७६ को टप फाइभमा मनोनयनमा परेका छन् । दमक ५ निवासी गायक चौधरीको ‘प्रियतमा’ एल्बमको पप गीततर्फ नवगायक अवार्डका लागि उत्कृष्ठ पाँचमा छनौट...